Myanmar Popular Singer & Actor Thazin: Caught on Tape ??!!! | Myanmar Celebrity Gossip & News
Myanmar Popular Singer & Actor Thazin: Caught on Tape ??!!!
A short making-love video clip circulating around the Internet today purporting to be Myanmar popular Pop Star & Actor Thazin isaphony --- this video hit the web today. The Girl in the video is extremely similar to Thazin and it seems that the Couple made their private video record themselves. So far, no official word from Thazin yet.
*****Shall We Delete this POST ??! We Request Your VOTE !!! (28 June)
We have received some emails that are requesting to Delete this Post.. Therefore, we would like to know our Visitors' view on it. Please give us Your Vote, We will respect the Voting Result. Poll will be closed next 12 hours.
Shall We Delete this Post ???
sumayntmonJune 27, 2012 at 2:53 PMomg!!!!ReplyDeletesumayntmonJune 27, 2012 at 2:57 PMomg!!!!ReplyDeletekingJune 27, 2012 at 3:15 PMသဇင်မဟုတ်နိုင်ပါ။ReplyDeleteRepliesthanwinJune 28, 2012 at 11:09 AMyesDeleteReplycherry21June 27, 2012 at 3:42 PMear yae aout sone nay yar wrong nay par daeReplyDeletelinkJune 27, 2012 at 4:21 PMyes, she is real thazin because i know that guy behind her. He is thazin ex boyfriend.ReplyDeletepookiJune 27, 2012 at 4:36 PMomg why did she do like that?ReplyDeleteAung LayJune 27, 2012 at 4:53 PMvideo ကြည့်ပြီးရင်ပိုသေချာတယ်။ ကြိုက်တယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ် နဲ.သဇင်အော်နေတာ သူတကယ်ကောင်းနေတာဘဲ။ReplyDeleteKandawgyiJune 27, 2012 at 6:10 PMwho cares? AS Long as it's not adultery, it's between married men and women. So, that's how babies are made. LOL. ;D what's A BIG deal?ReplyDeleteKandawgyiJune 27, 2012 at 6:11 PMas long as sex is between married men and women, it's okay. men do cheat sometimes and so do women.ReplyDeleteKandawgyiJune 27, 2012 at 6:11 PMso the motto, "as long as you cheat, i will cheat. you cheat as long as u don't have AIDS and stds. I cheat as long as i don't have stds."ReplyDeleteKandawgyiJune 27, 2012 at 6:12 PM;D but definitely, it's not advisable and it is not good to be sleeping around if you are not intended to marry the person you sleep with.ReplyDeletelanJune 27, 2012 at 6:17 PMyes ,, tha zin with L LUNE WAR.at shwe gone dine hotel...ReplyDeleteNyi NyiJune 27, 2012 at 6:56 PMVideo Link?ReplyDeleteမောင်လေးရဲ့မမJune 27, 2012 at 7:02 PMသဇင်ဟုတ်ပါတယ်...ReplyDeleteivoryJune 27, 2012 at 7:44 PMwhere is video?ReplyDeletebellisungJune 27, 2012 at 9:28 PMI'M sorry Thazin i'm sure it's you and i did download the link that they post it really was you. I was the big fan of u, but after the VIDEO i feel so sorry for you. bcuz you also Pop star actor n singer the world know you as well. so i guess just the way life is go..ReplyDeleteKyawzin MoeJune 27, 2012 at 10:39 PMhttp://www.mediafire.com/?c18r1ohtgmhjo8qReplyDeletecyberlink powerdvdJune 27, 2012 at 10:59 PMyes i think really she is tha zinReplyDeleteNyo Shin MgJune 28, 2012 at 1:13 AMသဇင်ဟုတ်ရင်တောင်မှဒါလူမဆန်တာသူများအိမ်ထောင်ကျပြီးမှတော်တော်စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျတာတင်တဲ့သူက.....။ReplyDeleteRepliesko koJune 28, 2012 at 2:33 AMရွှေညီအကိုတိုရေ.... အတိတ်မှာဘာတွေဘဲဖြစ်ခဲ့သော်လည်းအခုတောမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီ..မိသားစုဘဝပြိူကွဲသွားအောင်တော့မလုပ်သင့်ဘူး..ယောက်ျားဆိုတာကိုယ်ဘယ်လောက်ဘဲပွေရှုပ်နေပါစေ..ကိုယ်ယူတဲ့အမျိူးသမီးတော့အသန်.ကိုရှာကြတာထုံစံပါ..နှမချင်းစာနာတရားထားပြီးစဉ်းစားပေးသင့်တယ်..DeleteReplyMin MinJune 28, 2012 at 1:35 AMသဇင်အစစ်ပါ။ ဗီဒီယိုတော့ဘယ်လိုထွက်လာလဲမသိပါ။ မြန်မာလိုပဲပြောထားကြတာပါ။ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ခုနှစ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အမျိုးသားက သဇင်ရည်းစားဟောင်း ကျော်သက် ပါ။ အမေရိကန် UC Davis Graduate တစ်ယောက်ပါ။ အခု လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဒုဝန်ကြီး စိမ်းလန်းစိုပြေပိုင်ရှင် ဒေါ်စန္ဒာခင် (မေသက်) ရဲ့သားပါ။ ဓာက်ပုံတိုက်ကြည့်ပါ။ http://komoethee.blogspot.com/2011/03/blog-post_9092.htmlReplyDeleteWinJune 28, 2012 at 2:08 AMဒီကောင်မ အရင်ကတည်းက ခံလာတာ အကောင်ပေါင်းများစွာနဲ .. အဲဒီထဲကတစ်ယောက်ပေါ့ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး..ReplyDeleteRepliesVioletJune 29, 2012 at 1:18 AMYa Right! Make sure your wife would beapure virgin... :DDeleteReplyKCUFJune 28, 2012 at 3:49 AMတကယ်အစစ်ပဲ....ဓါတ်ပုံထဲကနားပေါက်ကိုရှင်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်.ReplyDeleteMOHEY KOJune 28, 2012 at 3:50 AMSRURUGReplyDeleteငမမ်းJune 28, 2012 at 5:46 AMကောင်းပါတယ် ဒီသဇင်ဆိုတဲ့ ကောင်မက လူတကာခံနေတဲ့ ကောင်မဆိုတာ သူနဲ့ပတ်သက်ဖူးသူတိုင်းသိကြပါတယ်............ပိုက်ဆံရှိတဲ့ကောင်ဖြစ်လို့ကတော့ သဇင်တို့က ခံပြီးသားဘဲ....သူ့ အကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးချိန်က ကျပြီ.......ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တင်တဲ့ သူ က အပြစ်မဟုတ်ဘူး......ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်က ကောင်းမှ မကောင်းဘဲ.......သူဇာတ်သူသိမ်းသွားတာပါဘဲ......ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပါReplyDeletebigJune 28, 2012 at 7:26 AMပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ ကတော့ အရှုံးမရှိပါဘူး ကြည့်ရတာပေါ့.. ကာယကံရှင် သဇင် အနေ နဲ့တော်တော် ထိခိုက် နစ်နာတာ စာနာသင့်တယ်...သူက အခု အတည်တကျ အိမ်ထောင်ကျနေပါပြီ...myanmarcelebrity အနေနဲ့ အငြိုး အတေး နဲ့သူတို့ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲ အောင် လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်.. ဒီ ဟာကို ပြန်ဖြုတ်သင့်ပါတယ်...ReplyDeleteRepliesjohnzoaJune 28, 2012 at 3:40 PMပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ ကတော့ အရှုံးမရှိပါဘူး ကြည့်ရတာပေါ့..ကာယကံရှင် သဇင် အနေ နဲ့တော်တော် ထိခိုက် နစ်နာတာ စာနာသင့်တယ်...သူက အခု အတည်တကျ အိမ်ထောင်ကျနေပါပြီ...myanmarcelebrity အနေနဲ့ အငြိုး အတေး နဲ့သူတို့ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲ အောင်လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်.. ဒီ ဟာကို ပြန်ဖြုတ်သင့်ပါတယ်...DeleteReplyHan NyiJune 28, 2012 at 7:32 AMတကယ့် သဇင်ပါပဲ......ReplyDeletekakasaJune 28, 2012 at 8:01 AMcan't watch the video on provided linkReplyDeletemahotemakan LayJune 28, 2012 at 8:33 AMသူများကိုပြောဖို့ ပဲကြသိတယ်..နင်တို့နှမသာဆို သူများနဲ့ ဖင်ချတဲ့ ဟာကြီးကိုနင်တွေ့ ရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ..လူလူချင်းတော့ ကိုယ်ချင်းစာကြပေါ့..ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့အဲ့ ဒီအမှားကြီးကိုပဲ..လက်ညိုးထိုးလို့ မဆုံးဖြစ်နေရင်အဲ့ ဒီလူဘ၀ကတော့ သွားပြီပေါ့.။။လူဆိုတာဘ၀ကံအကျိုးပေးခြင်းတော့ ဘယ်တူကြပါ့ မလဲ..ဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆိုပေမဲ့ ..ပြီးခဲ့ တာတွေကိုဒီလိုပဲချီးခြောက်ရေနူးနေကြရင်..လောကမှာအနံ့ ထွက်မဲ့ သူကြီးပဲ..ဘယ်သူကခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ရှိကြလဲ..ငါနဲ့ တော့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး.ဒီလိုတင်ပြခြင်းခံရတဲ့ သူအတွက်စိတ်မကောင်းလို့ ပါ.သူတို့ ရဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးမပျက်စီးခဲ့ ရင်တော့ ဝမ်းသာစရာပါပဲ...တို့ မြန်မာတွေအချင်းချင်းဖေးမကူညီမေတ္တာပြနိုင်ကြပါစေ..ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့..ReplyDeleteUnknownJune 28, 2012 at 9:37 AMgod damn it!!!!take it off man!!!!I personally hates thazin but this is gonna ruin her marriage life!Don't you guy's have sisters or cousin or something????For me whoever post this image or vidoe is more disgusting!!!ReplyDeleteRepliesThida Ngal NgalJune 28, 2012 at 11:44 AMI agree with you 100%DeleteReplyabcJune 28, 2012 at 10:36 AMဝေဖန်ရေးတော့မလုပ်တော့ပါဘူး အချစ်ရဲ့မျှဝေခံစားမှု့ပေါ့ နောက်တယောက်တွေ့တော့လဲ အချစ်အတွက်တဖန်မွှေးဖွားခြင်းပဲလေ ငွေကြေးကြောင့်ဆိုရင်တော့ ဘ၀ကံပေါ့ReplyDeleteabcJune 28, 2012 at 10:37 AMတို့တော့ တရားပေါက်ပြီး တောထွက်တော့မယ်ReplyDeleteAndyJune 28, 2012 at 12:50 PMသဇင်ဗီဒီယိုကို onlineပေါ်တင်တဲ့သူဟာ သူ့ဇနီး၊ သူ့အမေ စတဲ့သူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဦးမှာ အတိတ်ကဒီလိုဇတ်လမ်းမျိုးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ ပါဝင်သူ၊သိမြင်ခဲ့သူတွေက ကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်းကြတာကို နားလည်နိုင်မယ်သူမျိုး မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ အချိန်တန်ရင် သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုး ပြန်ခံစားရမှာပါ။ReplyDeleteRepliesMin MinJune 28, 2012 at 2:17 PMဒီဗီဒီယို သဇင်ဆီကထွက်တယ်ဆို ခင်ဗျားဘာပြောမလဲ။ သူတို့လောကက အပြင်ကထက်ပိုရှုပ်ပါတယ်။ သိတယ်သူတွေမေးကြည့်ပါ။DeleteVioletJune 29, 2012 at 1:17 AMHey Min Min, whoever you are, would your daughter be delighted to upload her porn video online if she fucked with one of her boyfriend, and now that she is married toagood guy? Just Think before you assume because when you assume, you lieterally get the ass out of you and me, meaning no body benefits! Ok Moron, you understands now?Deletedavid.aung23@gmail.comAugust 7, 2012 at 8:45 PMတကယ်ဆိုရင်.ဒီလို ကိစ္စတွေက မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းမှာ.နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဟာတွေပါ............ဟိုနှမလိုး က.ဘာဂလဲ့စားနဲ့.webcam နဲ့ ခိုးရိုက်ပြီး Online ပေါ်တင်လိုက်သလဲဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေသာဦမှာပါ..........တော်တော်လေး .....လုပ်ရက်တဲ့ ကောင်မလဲ.မအေ.နှမ..အမ..တွေရှမှာပါ.မြန်မာလူမျိုး.......ဗုဒ္ဒဘာသာမှာ.ကိုယ့်ပြုသောကံကိုယ်စီပြန်လာမယ်.......ဆိုတဲ့ အတိုင်း.ဒီကောင်လဲ.......တနေ့ ခံရမှာပါ...........DeleteReplyAndyJune 28, 2012 at 1:07 PMနောက်ကယောက်ကျားဟာ ဒီပုံတွေကိုတင်တဲ့သူ ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ တင်စကပုံတွေထဲမှာ သူမျက်နှာရှင်းနေအောင် မြင်ရပါတယ်။ အခုတော့ ကြောက်လာပြီမို့ သူ့ပုံတွေကို ဖြတ်တာဝါးတာမျိုး လုပ်ထားတာပါ။ ဒီလိုမဖွယ်မရာပုံတွေ မတင်ရဲတော့အောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒါမျိုးကိုရေရှည်ဆက်လုပ်ခွင့်ပြုထားရင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသားတွေပဲ သိက္ခာကျ အရှက်ရကြရမှာကို မြင်ကြစေချင်ပါတယ်။ReplyDeleteheinhtetJune 28, 2012 at 5:34 PMmaking love is normal they just being nature LOLReplyDeletelanJune 28, 2012 at 7:53 PMif anyone need link ??? i upload again here... password (thazin)http://www.mediafire.com/download.php?nze5j43l5sdqsvtReplyDeleteRepliesmin htweJune 29, 2012 at 2:24 AMHow you know the password?DeleteReplyko kyawJune 28, 2012 at 8:49 PMHello ,Myanmar Celebrity Team I'd like to request you that you should delete it immediately and pls sympathise for ladies.This post impact their connubial seriously and you shouldn't upload this type of photos and videos anymore.I am not related with them,justaaudience,PLEASE!!!!!ReplyDeleteko kyawJune 28, 2012 at 8:50 PMmyanmarcelebrity အနေနဲ့ အငြိုး အတေး နဲ့သူတို့ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲ အောင်လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်.. ဒီ ဟာကို ပြန်ဖြုတ်သင့်ပါတယ်...ReplyDeletePar GyiJune 28, 2012 at 9:49 PMShall We Delete this Post ??? တင်လို့ပြီးမှ တစ်ကမ္ဘာလုံးသိမှ ဖျက်လဲ ဘာထူးမလဲဗျာ။ မတင်ခင်က စဉ်းစားပေါ့။ReplyDeleteshweshweJune 28, 2012 at 9:51 PMPls don't delete it,it is advertise for Thazin,so everyone can pay and sex with her,she will thank you to myanmar celebrity because of she be burmese porn star,burmese community are very opening mind,don't back to Ne Win's time.Now u can see any myanmar porn web site.ReplyDeleteYu NandarJune 28, 2012 at 10:01 PMမယုံရဲဘူး မမသဇင်တော်၂ မိုက်တာပဲReplyDeleteDR SEX GYIJune 28, 2012 at 11:54 PMShould give punishment to guy otherwise should thank to guy who post for allReplyDeletesansanJune 29, 2012 at 12:37 AMhttp://moviestar.myanmarcelebrity.com/2009/12/myanmar-popular-singer-and-actress.htmlReplyDeletesansanJune 29, 2012 at 12:38 AMဓါတ်ပုံနှင့်တိုက်ကြည့်ပါ နားပေါက်ဖေါက်ထားတာကိုReplyDeletegoldenland.automobileJune 29, 2012 at 4:22 AMသေချာသွားအောင် တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ကြည့်ချင်သေးတယ် ဖွင့်လို့ရအောင် လုပ်ပေးပါReplyDeleteReplieslanJune 29, 2012 at 7:58 AMhttp://www.youtube.com/watch?v=P7s0sNYe7HI&feature=youtu.beDeletehay ooAugust 31, 2012 at 10:20 PMhaymarmoon.87DeleteReplyBryne WoodJune 29, 2012 at 5:35 AMUse VLC player to see it http://download.cnet.com/VLC-Media-Player/3000-13632_4-10267151.html, it is only her fault, nobody fault, if she doesn't like it, don't be in one.ReplyDeleteအမည်မသိAugust 8, 2012 at 7:40 PMသဇင်ဟုတ်ပါတယ်ReplyDeleteSparkyNovember 15, 2012 at 11:26 PMbetter delete this file due to really lose face for our myanmar people.whatever she did is her mentally situation but we must remember to our culture and other nations should not be under estimated our culture. ReplyDeleteAdd commentLoad more...